DURUUSTA KU JIRTA TAARIIKHDA XIDDIGA KUBADDA CAGTA EE MAXAMED SALAAX. – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO DURUUSTA KU JIRTA TAARIIKHDA XIDDIGA KUBADDA CAGTA EE MAXAMED SALAAX.
DURUUSTA KU JIRTA TAARIIKHDA XIDDIGA KUBADDA CAGTA EE MAXAMED SALAAX.
(Q.1)=============Qormadan waxa aynu ku soo ururinynaa taariikh nololeedka xiddiga kubadda cagta ee xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Ingiriiska. Qofka nolosha guusha ka gaadhay oo taariikhdiisa la daraaseeyaa waxa ay noqon kartaa casharo uu qofku ka baran karo waxyaabo ka caawiya guusha uu higsanayo isaguna.
Waxa uu ku barbaaray tuulaha Najriij oo ku yaalla degmada Alqarbiya ee dalka Maar, isaga oo weli aad u yar ayaana la arkay saansaanta hibada kubadda cagta ee ku jirta. Sidaas awgeed isaga oo weli toddoba jir ah ayaa uu aabihii ku dhiirrigeliyey ciyaarta kubadda cagta, oo uu si dhaqso ah ugu biiray naadiyada carruurta deegaanku ku tartamaan. Mar kale ayaa uu aabihii isaga weli Salaax yar waxa uu geeyey naadiga Biisoon si uu ugu sii tababarto.
Halkaas ayaanay ka heleen dillaaliinta naadiga Muqaawaluuna Danda, oo ka tirsan naadiga Muqaawaluuna Alcarab oo Qaahira ka dhisan. Naadigan ayaana muddo kaddib ka codsaday in uu ku biiro kooxihiisa carruruta ah.Tallaabadii koowaad ee uu Maxamed Salaax dhinaca mihnadda si rasmi ah ugu qaadayba waxaa ka hor timi caqabad lama filaan ah oo ku sigatay in ay qaadhiso hankiisa ciyaarta kubadda cagta.
Hooyadii ayaa si adag u diiday in wiilkeedu uu tago magaalada Qaahira ee naadiga qaatay uu doonayey in uu geeyo, iyada oo ka warwar qabta in safarka uu isaga dab qaadayo Qaahira iyo Tuuladiisa Najriij uu sabab u noqdo in ay weydo maadaama oo uu jidku ahaa mid aad u dhib badan oo shilal joogto ahi ka dhacaan. Sida oo kale Maxamed Salaax hooyadii waxa ay aaminsanayd in aanu jirin wax waxbarashada lagu doorsan karaa, sidaas awgeed waxa ay wiilkeeda la doonaysay in uu nidaamka waxb arasho ee rasmiga ah dhammaysto, in uu Qaahira tagana waxa ay u arkaysay in ay jihadaas waxbarashada ka leexinayso.
Salaax nin yar buu ahaa kubaddana aad buu u xiisaynayey, isaga oo aabihiina taageero badan uga helay doonistiisa. Laakiin tallaabada uu arrintan ku xalliyey ayaa noqotay dersi yaab leh oo muujinaya sida uu u yahay shakhsi leh hibooyin badan oo hoggaaminta naftu ka mid tahay. Salaax isaga oo aan diidmo qayaxan iyo dhibaato kale hooyadii ku abuurin waxa uu la galay dood dheer oo uu ugu sheegayo jacaylkiisa kubadda cagta, isla markaana ugu xaqiijinayo in aanu waxbarashada hooyadii la doonayso ka tegeyn.
Xalka uu keenay hooyadiina ku qanciyeyna waxa uu noqday, in uu arroor kasta sidii caadiga ahayd ugu jarmaadi doono dugsiga waxb arashada, marka uu soo rawaxana u safri doono Qaahira si uu tababarka u soo qaato. Waxad kale oo uu u sheegay in uu iibsanayo talefanka gacanta oo uu mar kasta u furnan doono in uu u jawaabo hooyadii ama isaguba la soo xidhiidho si uu qalbigeeda uga ilaaliyo warwarka safarka badan ee uu geli doono.
Maxamed Salaax waxa uu doonayey in uu ciyaarta kubadda cagta ka gaadbo heerarka ugu sarreeya dalka Masar, laakiin niyaddiisa kuma ay soo dhicin, kuman a uu fikirin in iman karto maalin uu xirfaddiisa kubadda cagta kaga shaqayso qaaradda Yurub. Laakiin dabeecadda sababaha guushiisa loo tirinayo ee uu illaa yaraantiisaas lahaa waa in aanu weligiiba ku qancin hadba halka uu joogo, balse mar kasta meel ka sii sarraysa raadinayey. LA SOCO…
waxaa qorey qoraa/wariye Marjaan
Previous articleMayir ku xigeenka caasimada, Cabdicasiis Cagaweyne ayaa yidhi,
Next articleCiidanka Eritrea oo maalin kaliya ku Diley 800 deegaanka tigreega
“ADHI SHUGUX SHUGUX KAMA ILBAXO” muuse Biixi